Banga ny tontolon’ny asam-panjakana ambony: mampiahiahy koa ny nahafaty an’i Tsiandopy Jacky | NewsMada
Banga ny tontolon’ny asam-panjakana ambony: mampiahiahy koa ny nahafaty an’i Tsiandopy Jacky
Ny eo tsy mbola misy mangirana, tonga indray koa ny hafa. Hita faty tao an-tranony eny Andavadobo, Ivato, tsy lavitra ny Croc Farm, omaly maraina, ny minisitra teo aloha sady “Inspecteur d’Etat”, Tsiandopy Jacky.
Tsy mazava ary manjavozavo tanteraka koa. Voalaza fa ny mpamily tonga haka azy handeha hiasa maraina no nahita ity mpiasam-panjakana ambony ity, efa tsy nisy aina intsony tao amin’ny efitrano fandriany. Hatairana avy hatrany ny an’ny fianakaviany nandre izany satria mbola nifandray an-telefaonina tamin’ny fianakaviany izy tany amin’ny 10 ora alina, nialoha izany. Efa eo am-pikasana hanaraka ny vady aman-janany hiala sasatra izy izao maty izao. Na izany aza, voalaza fa misy mpiambina roa lahy ity tanànany ity, ka mbola andrasana ny mety ho fanadihadiana momba izany. “Misy fikorontanana tao an-trano ka tsy fantatra na fanahiniana na zavatra hafa ny niseho. Mbola hojerena koa na nisy fidirana an-keriny na ny tato an-trano ihany ny nahavanon-doza. Hanamarina izany ny famotorana”, hoy ny lehiben’ny Emmo/Reg, ny Kly Ravoavy Zafisambatra, tonga nizaha ifotony teny an-toerana.
Manelingelina ny tombontsoan’ny hafa ?
Etsy andaniny, vao avy namita iraka nanao fisafoana tany amin’iny faritra avaratry ny Nosy iny i Tsiandopy Jacky Mahafaly, izao nisy namono izao. Anisan’ny nahafantarana azy ny fahitsiny ary hentitra sy tsy milefitra amin’ny atao. Herinandro vitsy lasa, mbola naneho hevitra somary hentitra tamin’ny gazety ny tenany. Mety misy ifandraisany amin’izany izao nahafaty azy izao ? Mpisafon-draharaham-panjakana rahateo ny tenany, ankoatra ny maha mpitarika sendikà azy ka ahina mety misy ifandraisany avokoa izany rehetra izany ? Tonga hatrany amin’ny famonoana olona an-kitsirano, rehefa manelingelina ny tombontsoan’ny sasany ?
Mba tsy ho very anjavony indray…
Efa nanomboka ny fanadihadiana ny eo anivon’ny zandrary eny Ambohidratrimo amin’izao fotoana izao ka andrasana ny marina sy ny ao ambadik’izao raharaha izao. Mba tsy ho very anjavony na ho vitavita ho azy toy ny raharaha samihafa teo aloha… satria nisy aina nafoy.
Tsiahivina fa 65 taona i Tsiandopy Jacky Mahafaly. Zanaky ny distrikan’i Vohémar any Sava. Efa mpikambana teo anivon’ny Fahefana avo (HAE), fony fitondrana Zafy Albert. Efa filohan’ny delegasiona manokana ho an’ny faritanin’Antsiranana. Nisahana ny toeran’ny minisitry ny Asam-panjakana sy ny asa ary ny lalàna sosialy, tamin’ny fitondrana Ravalomanana. Mpikambana ao amin’ny birao politikan’ny antoko Tim. Efa loholon’i Madagasikara avy amin’ny Tim, voafidy tao amin’ny faritra Sava. Filohan’ny sendikàn’ny mpisafon-draharaham-panjakana (SIEM). Mpikambana eo anivon’ny Filankevi-pitantanan’ny Oniversiten’Antsiranana.
Araka izany, mbola mandeha ny fanadihadiana ny amin’ny nahafaty an-dRakotoarivelo Mamy. Nipoitra indray koa ity ny famonoana an’i Tsiandopy Jacky…